Fikojakojana ny biolo | Ny toeranao hisorohana ny lesoka ary hitandrovana ny PC-nao
Ahoana ny fomba famerenana sy famerenana ireo biraonao Desktop default amin'ny Windows 10
KB4464455 Windows 10 Version 1809 Hanorina 17763.107 - 13 Nov 2018
Ahoana ny fomba hisafidianana daty hampiatoana ireo fanavaozana ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fomba famakiana sy fifandraisana amin'ny efijery amin'ny fampiasana ny totozy ao amin'ny Windows 10
Sintomy ny Beautiful Windows Windows 10 Theme
Ahoana ny fomba hanamboarana ny sary ratsy AsusTPcenter.exe ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fampiasana Ok Google isan'andro | Ampifanaraho haingana ny fitaovanao
Ok Google dia fitaovana ampiasaina isan'andro, izay ahafahanao manodinkodina mora foana ny findainao, ny fitaovana mampiasa ny mpanampy dia sokajiana ho karazany roa: Fitaovana izay mampiditra ny ok google Devices izay...
Ahoana ny fomba hanokafana fisie JNLP
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana elektronika dia manana rakitra sy rindranasa noforonina tamin'ny endrika maro samihafa. Na izany aza, rehefa tsy misy programa mpamaky iray dia tsy azo atao ny manao fiasa sasany na mijery rakitra sasany avy amin'ny tranokala tianao. Izany no izy raha ny amin'ireo rakitra ...
Ahoana no hahitanao ny adiresy IP an'ny olona iray
Mety efa nanandrana nitady adiresy IP an'ny olona ianao indraindray ary tsy nahomby. Na izany aza, amin'ny fampahalalana izay hovakinao amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao ny fomba hahazoana IP olona ao anatin'ny segondra vitsy ...
Ahoana ny fomba firaketana ny lalao Wii
Androany, ny ankamaroan'ny lalao video dia manome fahaiza-manao vaovao ho an'ireo mpankafy azy. Izany hoe avelan'izy ireo hanatsara ny fahaiza-manao mifandraika amin'ny fanodinana vaovao, izay midika hoe fampiasana fahatsiarovana, fiheverana, fahatsapana, ...
Ahoana ny famolavolana NTFS amin'ny alàlan'ny solosaina Mac OS
Amin'izao fotoana izao, misy karazana endrika maro ho an'ny kapila mafy sy singa fitahirizana solosaina Mac OS. Iray amin'ireo endrika ampiasaina indrindra ny NTFS ary amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba izany izahay. Avy eo, hanazava ny fomba ...
Fantaro raha nisy laharana voasakana niantso anao
Raha hitanao fa mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia satria efa imbetsaka ianao no nanontany tena toy izao: Ahoana no ahafantaranao raha misy nomerao voasakana niantso ahy? Soa ihany, anio no ahitanao ny valiny ary ho afaka hahafantatra ireo safidy hafa anananao ianao ...
Ahoana ny fandikana CD amin'ny PC-nao
Ny fandikana CD amin'ny PC dia zavatra iray izay natao matetika tokoa, satria tsy dia nisy fomba firy nitahirizana vaovao. Na izany aza, rehefa nivoatra ny zava-drehetra dia hadinon'ny olona sasany izany ...
Fampiharana handikana ny fifandraisana amin'ny iPhone mankany SIM
Raha mila manondrana fifandraisana iPhone amin'ny SIM ianao ary hitanao fa tsy misy safidy amin'izany, tokony ho fantatrao fa azo atao ny manao azy amin'ny fametrahana rindrambaiko. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity safidy ity dia ny mamafa ny rindranasa napetraka indray mandeha ...
Ahoana ny fanesorana ny Fortnite
Rehefa manaisotra ny rindranasa amin'ny solosaina ary tsy mampiasa ny fomba mety, dia matetika misy rakitra malalaka izay maka habaka ary misy fiantraikany amin'ny asany. Ny fanafoanana ny lalao video dia toa miteraka an'io toe-javatra io, koa raha te-hamongotra ny Fortnite ianao dia ataovy izay ...
Ahoana ny fanavaozana ny sarintany TomTom maimaim-poana
Ny rafi-pitaterana ho an'ny fiara dia be mpampiasa eran'izao tontolo izao, hamaly io fangatahana io dia misy fampiharana marobe eo amin'ny tsena. Na izany aza, misy ny sasany amin'ireo fampiharana toa an'i TomTom izay mankafy ...
Ahoana ny fomba handaminana TP-LINK Extender
Raha manana ny fitaovana TP-LINK Extender ianao ary tsy hainao ny manamboatra azy dia eo amin'ny toerana mety ianao, satria eto no hahitanao ny dingana arahinao hahatratrarana azy. Rehefa manana toerana ao an-tranonao na any amin'ny biraonao ianao izay misy ny signal Internet tsy misy tariby ...
Mamoha karatra SD voaro voaaro
Amin'izao fotoana izao, maro ny olona no manana olana amin'ny fakana tahaka sy famindrana rakitra amin'ny karatra micro SD. Izany dia vokatry ny fiarovana an-tsoratra ananan'ireto fitaovana elektronika ireto. Marihina fa ity fiarovana ny fanoratana ity dia fitaovana fiarovana izay ...
Sintomy maimaimpoana ny Skype
Raha mitady App ho an'ny fandefasana hafatra sy antso avy amin'ny fitaovanao ianao, tsy misy tsara noho ny misintona Skype maimaim-poana. Izany ve, ity fampiharana ity dia nanjary iray amin'ireo safidy tsara indrindra hifandraisana amin'ny fianakavianao sy ny namanao mampiasa ny ...
Fampiharana fampiasa matetika hamoronana Android Animoji
Raha manana fitaovana Android ianao ary tianao ho fantatra ny fomba ahafahanao mamorona Animoji samihafa miaraka aminy, dia eo amin'ny toerana mety ianao. Satria androany izahay dia hanazava ireo fampiharana samihafa azonao ampiasaina hanamboarana azy ireo. Toy izany koa, hianaranao ny dingana ...
Ianaro ny fomba maka tahaka ny DVD voaaro
Raha efa ela no nitadiavanao fomba iray handikana DVD voaaro nefa mbola tsy nahomby dia tonga tany amin'ny bilaogy manondro ianao. Satria anio dia ho fantatrao ireo programa ilaina hahatratrarana azy, manomboka amin'ireo fitaovana fampiasa ao amin'ny Windows ka hatramin'ny ...
Ahoana ny hamafana ny isa SIM
Raha reraka ianao manana telefaona olona izay tsy itenenanao intsony amin'ny fitaovanao ary na dia hofafanao aza izy ireo dia hita foana, eto dia ho hitanao ny vahaolana. Satria izahay dia hanazava ny fomba ahafahanao mamafa ny fifandraisana SIM amin'ny fitaovana Android amin'ny ...
Ahoana ny fametrahana ny Kali Linux
Raha reraka ianao mitady ny fomba hametrahana ny Kali Linux dia tonga amin'ny toerana mety ianao, satria amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny fomba hahatratrarana azy. Androany, mahazatra ny mpampiasa maro ny mametraka rafitra fandidiana amin'ny solo-sain'izy ireo hanombanana ny fiarovana ...
Ahoana ny fahafantarana ny datin'ny fividianana finday
Raha matetika ianao no nitady fanazavana momba ny Ahoana ny fahafantarana ny taonan'ny finday? ary tsy nahomby ianao, androany dia vintana. Satria amin'ity lahatsoratra ity dia hamaly izany fanontaniana izany izahay, ka manolotra anao ny antsipiriany rehetra momba ny safidy hafa izay ...
Ampidino ny evolisiona an'ny Jurassic World
Raha iray amin'ireo olona tia ny vanim-potoana Cretaceous ianao ary mifanjevo amin'ny dinôzôro ary koa tahaka ny lalao video, ho anao ity lahatsoratra ity. Vao tsy ela akory izay, nisy lalao video vaovao navoaka, Jurassic World Evolution, izay, ...
Ahoana ny fomba fampidinana kilalao maimaim-poana amin'ny Nintendo 3DS
Amin'izao fotoana izao, ny filalaovana lalao video dia miha-ekonomika kokoa noho ny fandrosoana ara-teknolojia tsy tapaka. Vokatr'izany, tsy ho afaka handray soa amin'ny tolotra tsy tapaka ianao, fa azo atao koa ny misintona lalao kalitao maro maimaim-poana amin'ny alàlan'ny karazana ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 129 »
Developer amin'ny asa aman-draharaha, mazoto amin'ny fitaovana. Hatramin'ny faha-11 taonako nanamboatra solosaina. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao? Mifandraisa aminay
© Fikolokoloana biolo 2019
WOW Blog avy amin'i Hevitra Acme